ကွင်းထဲမှာပြန်မြင်ရနိုင်တဲ့ ဝင်းဂါး ၊ ရုပ်တုနဲ့ ထပ်ဂုဏ်ပြုခံရပြန်တဲ့ ဆာအဲလက်စ် ၊ စီးတီး ပစ်မှတ်ကို ဖြတ်လို့ လီဗာပူးကို တိုက်တွန်းတဲ့ ဖာဒီနန် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
ကွင်းထဲမှာပြန်မြင်ရနိုင်တဲ့ ဝင်းဂါး ၊ ရုပ်တုနဲ့ ထပ်ဂုဏ်ပြုခံရပြန်တဲ့ ဆာအဲလက်စ် ၊ စီးတီး ပစ်မှတ်ကို ဖြတ်လို့ လီဗာပူးကို တိုက်တွန်းတဲ့ ဖာဒီနန် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
By Edi Tor July 30, 2021
အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင် နည်းပြကြီး အာဆင်ဝင်းဂါး ဟာ ဆွစ်ဇာလန် အသင်းရဲ့ လက်ရွေးစင် နည်းပြ ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်း စားလာခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။ အာဆင်း ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ နည်းပြ အဖြစ် ကနေ အနားယူ ခဲ့တာ ၃ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ချဲလ်ဆီး ခံစစ်မှူး ကတ်ဇူးမား ကို ခေါ်ယူဖို့ လုပ်ဆောင် နေပြီး ဇူးမား ကလည်း ကွန်ဒီ ရောက်ရှိ လာပါက စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ် ကနေ ထွက်ခွာဖို့ စဉ်းစားဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကတော့ ဆီဗီးလား က ကွန်ဒီ အတွက် တောင်းဆို ထားတဲ့ ပေါင် သန်း ၈၀ ကို ပေးချေဖို့ ဆန္ဒ မရှိဘဲ ကစားသမား ( ဇူးမား ) + ငွေသား နဲ့ သာ ကမ်းလှမ်းဖို့ ပိုမို လိုလား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဝက်စ်ဟမ်း ဟာ PSG ဂိုးသမား အေရိုလာ ကို ရာသီကုန် အထိ အငှား ခေါ်ယူ လိုက်ပြီး အပြီးသတ် ဝယ်ယူခွင့် လည်း ပါရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
စကော့တလန် ကလပ် အဘာဒင်း အသင်း ဟာ သူတို့ရဲ့ ဂန္ထဝင် နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် ကို ဂုဏ်ပြု တဲ့ အနေနဲ့ အသင်းရဲ့ ကွင်းရှေ့မှာ ရုပ်တု ထုလုပ် ဂုဏ်ပြု သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဆာအဲလက်စ် ဟာ အဘာဒင်း နဲ့ စကော့အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ ၊ ဥရောပ ဖလား တို့ကို ရယူပေးခဲ့ပြီး ၁၉၈၆ မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲံတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒိန်းမတ် ကွင်းလယ်လူ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ဟာ လာမယ့် အပတ် ထဲမှာ အင်တာမီလန် ရဲ့ ဆေးအဖွဲ့ နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သူ့ရဲ့ နှလုံး အလုပ်လုပ်မှုကို စစ်ဆေး သွားမယ်လို့ သိရပါတယ် ။ သတင်းတွေ ကတော့ အဲရစ်ဆင် ဟာ အနည်းဆုံး ၆ လ ခန့် နားရနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြ လာခဲ့ကြပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာ ကတော့ အသင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်မဆင်း သေးဘဲ အမေရိကန် မှာ အနားယူ နေဆဲ ဖြစ်ကာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း နဲ့ ဆုံတွေ့ ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် နဲ့ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲကို ဝင်နွဲ ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဂစ်နက် ကတော့ သူ့အနေနဲ့ လက်ရွေးစင် အသင်း ကနေ အနားယူဖို့ စိတ်ကူး မရှိသေးဘဲ ၂၀၂၄ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲကို ပြင်သစ် နဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စိတ်ကူးနေကြောင်း ပြောဆို ခဲ့သလို ဘာပေ နဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်း တို့ကိုလည်း သူနဲ့ အတူ ပါဝင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် နဲ့ စာချုပ် ကုန်ဆုံးသွားပြီး လတ်တလော မှာ အသင်းလက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အီတလီ ခံစစ်မှူးကြီး ချီယာလီနီ က သူဟာ နွေရာသီ အားလပ်ရက် ကနေ ပြန်ရောက်လာတာ နဲ့ ယူဗင်တပ် နဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆို မှာ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ အိုင်ယက်စ် ဂိုးသမား အိုနာနာ ကို စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့ဘဲ ဆက်သွယ်မှုလည်း မပြုလုပ် တော့ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ ကလပ် ဆာဆူအိုလို အသင်းဟာ ဘရာဇီး ကလပ် ဂရီမီယို အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ မက်သီးယပ်စ် ဟင်းနရစ် နဲ့ နောက်ခံလူ ထရက်ဆိုဒီ တို့ကို ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်
လီဗာပူး က စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်းထွက် နေတဲ့ အိုင်ဗရီကိုစ့် ကွင်းလယ်လူ ဖရန့် ကတ်ဆီ ဟာ အေစီမီလန်နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ နီးစပ် နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး က စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ အတ္တလန်တာ နောက်ခံလူ ခရစ်ရှန် ရိုမဲရိုး ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစား လာခဲ့ပေမယ့် ၂ သင်းစလုံးဟာ အီတလီ ကလပ် သဘောကျစေမယ့် ဈေးနှုန်းမျိုးနဲ့ မကမ်းလှမ်း ထားနိုင်ကြဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
Romero ဘာစီလိုနာ နဲ့ ယူဗင်တပ် တို့ သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့မှာ ကစားမယ့် ဂမ်ပါ ရာသီကြို ခြေစမ်း ဖလား ပွဲကို နူးကမ့် ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင် သွားမှာ မဟုတ်ဘဲ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ လူငယ်လေ့ကျင့်ရေးကွင်း ဖြစ်တဲ့ ယိုဟန်ခရပ်ဖ် ကွင်းမှာ ကစားသွားမယ် လို့ သိရပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်းဟာ ဝါရင့် နောက်ခံလူ ဒါနီ ကာဗာရယ် ကို စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီလို့ ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကာဗာရယ် ဟာ မက်ဒရစ် ကလပ် မှာ ၂၀၂၅ အထိ ဆက်ရှိနေတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း ရီယို ဖာဒီနန် ကတော့ လီဗာပူး အနေနဲ့ မန်ချက်စတာ စီးတီး က ခေါ်ယူဖို့ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ ဗီလာ အသင်းခေါင်းဆောင် ဂျက် ဂရီလစ်ရှ် ကို ကြားဖြတ် ခေါ်ယူ သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကြောင့် အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲဝင် ကျွမ်းဘား အသင်းကနေ နှုတ်ထွက် ခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန် ကျွမ်းဘားစတား ဆိုင်မွန်ဘိုင်းစ် ဟာ အသင်းဖော် ဆူနီဆာ လီ ရဲ့ All-round ကျွမ်းဘား ဗိုလ်လုပွဲ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ပွဲကြည့်စင်ပေါ် ကနေ လာရောက် အားပေး သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ဆိုင်မွန် ရဲ့ နေရာကို အစားဝင် ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ် ဆူနီဆာလီ ဟာ ဘက်စုံကျွမ်းဘား ပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ဆွတ်ခူး ရယူ ပေးခဲ့တယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . .